हाम्रो पात्रोका संस्थापक शंकर उप्रेतीले डा. ढकालको नेतृत्व पाउँदा आफूहरू उत्साहित भएको बताएका छन्। डा. ढकालले पनि हाम्रो पात्रोलाई थप सफल र वृहत बनाउन लागिपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
हाम्रो पात्रो एप अहिलेसम्म १ करोडभन्दा धेरै पटक डाउनलोड भइसकेको छ। नेपाल र विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीले यो मोबाइल एप प्रयोग गरिरहेका छन्। सन् २०२१ मा सामान्य क्यालेन्डरयुक्त मोबाइल एपबाट सेवा सुरु गरेको हाम्रो पात्रो यतिखेर नेपालकै ठूलो मोबाइल प्लेटफर्म बनिसकेको छ।
अहिले यो मोबाइल एपमा पात्रोसहित समाचार, रेडियो प्रसारण र ज्योतिष लगायत सेवा उपलब्ध छन्।